[Zvakasarudzika] 'Iyo Nyowani Mutants' Kuburitswa Kunobatwa (Zvakare) - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau [Zvakasarudzika] 'Iyo Nyowani Mutants' Kuburitswa Kunobhombwa (Zvakare)
[Zvakasarudzika] 'Iyo Nyowani Mutants' Kuburitswa Kunobhombwa (Zvakare)
by David N. Grove April 17, 2019 1,540 maonero
Kanganwa nezve iwo Nyamavhuvhu 2, 2019, North America zuva rekuburitsa re The New Mutants. Zuva rekuburitsa The New Mutants, iyo yakavakirwa pachikwata cheMarvel Comics chezita rimwe chetero, chakatamiswazve, sekureva kwesosi kuFox.
Yekutanga kuburitswa zuva re The New Mutants.
Zuva idzva rekuburitsa harisati ratemerwa The New Mutants, sekureva kweFox source. "Iyi firimu iri kutamiswa nekuda kwekubatana kweDisney-Fox," rinodaro sosi. “Vanoda kumirira kusvikira kubatanidzwa kwapera vasati vaita sarudzo nezvekuburitswa kwemamwe mafirimu, kusanganisira The New Mutants. "
Nepo sosi yakaramba kutaura kuti zuva rekuburitsa kana kwete The New Mutants ichatamiswa zvachose kubva mu2019, izvi zvinoita sekunge chokwadi, zvichipiwa kuti Fox, zvinonzi, ichiri kuda kutangazve, izvo zvisati zvatanga. "Zuva idzva rekuburitsa rinenge riri kure kubva muna Nyamavhuvhu," rinodaro sosi. "Hapana chimwezve chinozivikanwa panguva ino."
The New Mutants, iyo yakatsanangurwa sefirimu rinotyisa mumhando yepamusoro, inotungamirwa naJosh Boone, uyo akanyora kunyora screenplay naKnut Lee uye akafananidza firimu Rosemary's Baby uye kupenya.
Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt, naAlice Braga nyeredzi mufirimu, iro rinotarisana neboka revadiki mutants vari kuchengetwa munzvimbo yakavanda uye vanofanirwa kurwira kuti vazviponese.